MW CMC Oo Booqday Maxjarka Wayn Ee Tuulada Harre - Cakaara News
MW CMC Oo Booqday Maxjarka Wayn Ee Tuulada Harre
Jigjiga(Cakaaranews) Khamiis, 22ka September 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa niskii danbe ee maanta booqasho indha-indhayn iyo kormeer ah kusoo maray mashruuca maxjarka wayn ee laga wado tuulada harre ee hoosta timaada degmada jigjiga.
Hadaba madaxwaynaha ayaa bogaadiyay dhismaha mashruucan oo gabagabo maraya isagoo hawl-wadeenada mashruucan iyo shirkada iibka, dhismaha iyo adeegyada gaarka ah ee booliska DDSI oo mashruucan gacanta kuhaysa ku amaanay shaqo-wanaaga ay muujiyeen mudadii todobada bilood ahayd ee ay lawareegeen mashruucan. Madaxwayne CMC ayaa intaa kudaray, in mashruuca oo ay kubaxday miisaaniyad dhan 100milyan oo birr uu faaiido uyeelan doono guud ahaanba shacabwaynaha dalka iyo deegaankaba iyadoo xoolihii wadanka kontarabanka kaga bixi jiray si sharci ah looga dhoofin doono deegaanka islamarkaana uu deegaanku yeelanayo suuq ganacsi xoolo oo xor ah oo caalamka oo dhan looga iman doono islamarkaana maalinkii laga dhoofin doono 100 kun oo neef. Taasoo ay bulshadu kaga kaban doonto khasaarihii badnaa ee ay xoolaha si bilaa sharci ah ugu iib-gayn jireen wadamo fog-fog oo aan iib faaiido leh lahayn.
Madaxwaynaha ayaana sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay gabagabaynta mashruucan isagoo kutilmaamay sababta keentay in mashruucani dhamaado inay tahay qiimayn iyo dabagal joogta ah oo ay xukuumada DDSI iyo ta federalkuba kuqiimaynaysay 7,aad walba iyo bil walba geedi-socodka dhismaha mashruucan. Wuxuuna hadalkiisii kusoo xidhay in kormeerka dhismaha mashruuca maanta uu yahay mid official ah oo daah-furaysa xaal-xaalka dhismahan.
Booqashadan ayaana kusoo dhamaatay jawi wanaagsan oo ay farxad horumarineed kudheehan tahay.